အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြောင့် ရေဖြူတွင် လူ ၃၀၀ ကျော် စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လပ်လုနီးပါးဖြစ်နေ - Myanmar Pressphoto Agency
MPA November 5, 20212min read
တနင်္သာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ ရေဖြူမြို့နယ်အတွင်း အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြောင့် စစ်ရှောင်လျက်ရှိနေသော ဒေသခံသုံးရာကျော်မှာ အစားအသောက်နှင့်ရိက္ခာပြတ်လပ်လုနီး ဖြစ်နေပြီး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများလည်း လိုအပ်နေကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
ရေဖြူမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြေးခန္တီရွာအနီးတွင်နိုဝင်ဘာလ၃ရက်နေ့က အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ စစ်ကားတစ်စီး မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် အနီးဝန်းကျင်ရှိ သစ်ကတုံးကျေးရွာ၊လေးအိမ်စု၊မြေးခန္တီကျေးရွာများတွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က တပ်စွဲပြီး ရမ်းကားနှိပ်စက်မှုများ ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ကျေးရွာတွေကို တပ်စွဲပြီးတော့ လူတွေကို စစ်မေးတာတွေ ပြီးတော့ နှိပ်စက်တာမျိုးတွေ ရှိတဲ့အတွက် ဒေသခံတွေက ရှောင်ကြရတာပေါ့။ နိုဝင်ဘာ၃ရက်နေ့ ညနေထဲက ရှောင်နေကြရတာပါ” ဟုစစ်ရှောင်များကို ကူညီပေးနေသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
မြေးခန္တီကျေးရွာအနီး မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်သား၇ဦး သေဆုံးပြီး ၁၀ဦးထက် မနည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ကျေးရွာများတွင်တပ်စွဲပြီး ရမ်းကားနှိပ်စက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ ရမ်းကားနှိပ်စက်မှုကြောင့် ထွက်ပြေးလာရသည့် စစ်ရှောင်များမှာ စစ်တပ်၏ အန္တရာယ်မှ လွတ်ကင်းသောနေရာများတွင် နေထိုင်ကြရပြီး အစားအသောက်၊ ရိက္ခာနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ လိုအပ်ချက်နေကြောင်းလည်း သိရသည်။
“အခုထိတော့ စားစရာနည်းနည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အစားအသောက်က သရက်ချောင်းကလိုမျိုး ရိက္ခာလမ်းကြောင်းတွေ ပိတ်ဆို့လိုက်ရင် အခက်အခဲတွေ ရှိလာမှာတော့ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေ အသုံးအဆောင်တွေကတော့ လိုအပ်နေပါပြီ” ကူညီပေးနေသူက ဆိုသည်။
အလားတူပင် ပြီးခဲ့သည့် လပိုင်းအတွင်းကလည်း သရက်ချောင်းမြို့နယ် တောင်ပျောက်တိုက်နယ်ရှိ ကျေးရွာအချို့မှ ဒေသခံ ၁၀၀၀ကျော်သည် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ အန္တရာယ်များကြောင့် တိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီး စစ်တပ်၏ ရိက္ခာလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် အစားအသောက် ပြတ်လတ်မှုကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို လက်နက်ကိုင်၍ အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက်နေသည့် ချင်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်း၊ မကွေး၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်း အစရှိသည့်နေရာများတွင် စစ်ဘေးရှာင်များ ထောင်ပေါင်းများစွာ ရှိနေကြပြီး ဘာသာရေးကျောင်းများ၊ တောထဲတောင်ထဲများနှင့် လွတ်မြောက်နယ်မြေများ၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များ၏ စခန်းများတွင် နေထိုင်နေရသည်။
#တနင်္သာရီတိုင်း #စစ်ဘေးရှောင် #MPA
Over 300 Out of Food in Yebyu Because of the Terrorist Military
Over 300 local residents in Yebyu township, Dawei district of Tanintharyi region who are escaping wars because of the terrorist military are nearly out of food and many items are also needed, according to local residents.
Afteraterrorist military car was attacked near Myaykhanti village within Yebyu township on November 3, the terrorist military took bases in nearby villages – Thit Katone, Lay Ein Su, Myaykhanti villages – and they are carrying out random tortures.
“After the blast mine attack, as usual, they took bases in the villages, tortured and interrogated people, so the locals had to run away. They have been escaping since November 3”, said one who is helping the IDPs.
In the blast mine attack near Myaykhanti village,7soldiers were killed and more than 10 were injured and the terrorist military tookabase in the village and carried out random tortures.
Those IDPs who escaped the random tortures are staying in places safe from the military danger and they are in need of food andalot of items for use.
“Till now, we still havealittle left to eat. But for food, if food supply routes are blocked like in Thayet Chaung, we’re worried there might be difficulties. We’re already in need ofalot of items”, said the helper.
Likewise, more than 1000 local residents from villages in Taungpyauk division of Thayet chaung township had to escape the danger of the terrorist military and they are facing food shortage because of the military’s blockage of supply support routes.
Thousands of IDPs there in places where armed resistance against the terrorist military is severe such as Chin State, Kayah State, Sagaing, Magway, Karen State, Tanintharyi, they are taking shelters in religious buildings, in the valleys, mountains, liberated areas and with the people’s defense forces.
#TanintharyiRegion @IDP #MPA
Tags: IDP militarycoup MPA Myanmar TanintharyiRegion
Previous: အထက်မြတ်လေး မြိုစစ်ဘေးရှာင်စခန်းတွင် နေအိမ်တချို့လိုအပ်နေ